Halleellaa Vatjiniyaa: Halleellaa rasaasaatiin namoonni 12 hajjeefaman - BBC News Afaan Oromoo
Halleellaa Vatjiniyaa: Halleellaa rasaasaatiin namoonni 12 hajjeefaman
Image copyright Reuters/WAVY-TV/NBC
Halleelaa rasaasaa guyyaa Jimaataa gamoo motummaa Ameerikaa bulchiinsa Varjiiniyaatti raawwatameen namoonni 12 ajjeefamanii hedduun madaa'aniiru.
Poolisiin akka jedheetti shakkamaan hojjataa yerroo dheeraa magaalaa qarqara galaana Varjiiniyaatu 'osoo adda hinbaasiin' gamoo motuummaa keessatti dhukaasuun ajjeechaa raawwate.
Namtichi qawwee eenyummansaa adda hinbaafamanee kunis dhukaasa poolisoota waliin taasifameen ajjeefameera.
Qondaaltoonni akka himanitti poolisichis miidhameera.
'Qawwee ariitiin dhukaasu irratti' seerri dabalataa gaafatame
Ajjeechaa ummataa kan biraa
Halleellichi attamiin dhaabate?
Haaleellaan dhukaasaa kunis gara sa'aatii booda jiddugala MBulchiinsa Galaana Varjiiniyaa lafa gammoowwan motummaa hedduun itti argamanitti eegalame. Eddichis poolisiidhaan erga dalleefameen booda hojjattoonni akka gadhiisanii baha taasifamaniiru.
''Namoonni gadii budhaaf yoo iyyaniif wacan qofa dhaggeenye'' jedha Megaan Baantoon gamicha keessatti gargaaraa bulchaan yoo dhaabbata TV naannichaa WAVY'ttti dubbatu.
Goodayyaa suuraa Kanneen miidhaan irra qaqabees gara hospitaalotaatti geeffamaniiru
Namoota ajjeefaman keesaa tokko ala konkolaataa keessatti kan rukutame yoo ta'u, kaan hafan ammoo gamicha keessa darbiii sadaffaarratti ajjeefamanii argaman, akka Qondaalli Ol-aanaa Poolisii Jeemsi Kerveraan jedhuutti.
Qondaaltoonni poolisii afuriis battalumatti gara gamoo keessa galuun bakka namtichi ajjeechaa raawwataa ture adda baasuun 'fuldura walitti dhokaasu'' eegalan, jedha Duree Kerveraan. namtichi miidhaa qaqqabsiisees jijjirraa dhukaasaa hedduun booda ajjeefameera.
Dureen poolisii akka jedheetti taateen yakkaa raawwatamees 'baayyee siukkanneessa fi akka adda waraanaa' fakkaata ture.
Goodayyaa suuraa Haaleelichis Jiddugala Bulchiinsa Qarqara galaanaa Varjiniyaatti gamoo 2 irratti ture
"Wantini ani isinitti himu barbaadu, qoondaaltoonni poolisii tibba wal waraansaatti akka namoonni kana caalaa gamicha keessatti hinajjeefamne dhaabaniiru,'' jedha Duree Kerveraan.
Poolisoonnis meeshaalee namtichi ajjeechaa raawwatti ittiin faydamaa ture qawwee harkaafi kan fageenyatti dhokaasu danda'u argachu himaniiru.
Waa'een namootaa ajjeefamanii raawwate maaltu beekamaa?
Eenyummaan namoota ajjeefaman 12 fi kan ajjeessee ganaa ifa hintaane. Duree Duree Kerveraa akka jeddeeti, maqaan ana ajjeechaa rawwatee ifa kan taasifamu erga maatiin firri jalaa ajjeefamee baraniin booda.
"Erga kana raawwaneen booda maqaa ishaa himu eegalla. Amma sanatti garuu 'shakkamaa' jenna sababii ammaaf xiyyeeffannaan keenya namoota balaa kanaan lubbunsaanii dhabaniifi maatiisaaniif kabajaa fi ulfina keennuu ta'eefu,'' jedheera.
Qondaala poolisii dabalatee ammaaf namoonni afur madaa'unsaaniis barameera. Ta'us miidhaan isaan irra qaqabe hangama cimaa akka ta'e hin himamne.
Lubbuun poolisii miidhaa irra qaqabees huffannaa rasaasa dhorku ofateef baraarame akka Duree Kerveraa riiportaratti himeetti.
Dubbi himaan Waayiti Hawuus akka himaniitti Pirezidaant Tiraamp waa'ee haleelaa kanaa dhaganiiru.
Waajjirri qorannoo Yakkaa (FBI) dhimmicha qorachuurratti poolisoota gargaaruun bakkichatti argama.
Senaatarri varjiiniyaa Tim Ka'ne ergaa twitaatiin ''haalleellaa kun raawwatamu dhagau kiyyaan baayyeen gaddee'' jedhaniiru.
''Qalbiin kiyyas maatii firootasaanii dhaban waliin yoo ta'u, kanneen miidhaan irra qaqabee ammoo akka dafanii wayyaa'aniif kadhannaa kiyya'' jedhaniiru.
Ajjeechaa ummataa Ameerikaa maaliif caalaa cimaa dhufee?